Ciidamada ammaanka Faransiiska oo toogtay nin hubeysan oo saddex qof dilay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldCiidamada ammaanka Faransiiska oo toogtay nin hubeysan oo saddex qof dilay
March 23, 2018 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Ciidamo katirsan Faransiiska oo taagn banaanka suuqa uu ninka hubeysan afduubashada dadka ugu heystay. [Sawirka]
Paris-(Puntland Mirror) Ciidamada booliiska Faransiiska ayaa toogtay nin saddex qof ku dilay koonfurta Faransiiska, sida maanta oo Jimce ah uu sheegay Wasiirka Arrimaha Gudaha Faransiiska.
Ninka hubeysnaa ayaa soo afduubtay gaari kadibna waxa uu afduub ahaan u qabsaday suuq kuyaala magaalada Trebes.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in dhacdada ay muujineyso sumad weerar argagixiso.
Masuuliyiinta Faransiiska ayaa sheegay in ninka weerarka geystay uu asal ahaan kasoo jeedo dalka Moroco, waaxana uu dalbanayay in la sii daayo Saalax Cabdisalaam, kaasoo kamid ah koox looga shaki qabo weeraradii Paris ka dhacay bishii November 2015, oo lagu dilay 130 qof.
Kahor inta uusan gelin suuqa, ninka hubeysnaa ayaa rasaas ku furay afar booliska katirsan oo ruc leynayay magaalada Carcassonne, waxaana uu dhaawacay hal kamid ah.
Warbaahinta Faransiiska ayaa sheegay in ninkaas weerarka geystay lala xiriirinayo Ururka Daacish.
Kani ayaa ahaa dhacdadii ugu horeysay oo argagixso tan iyo markii Madaxweynaha dhawaan la doortay ee Faransiiska uu qaaday labo sanno oo xaalad deg deg ahaa oo dalkaas la gashay.
Dalka France ayaa sanadihii u dambeeyay la kulmay weeraro argagixiso oo khasaare badan ka dhashay, oo ay masuuliyadiisa sheegteen Daacish.
August 20, 2016 Booliiska Rwanda oo toogasho ku dilay saddex nin oo looga shaki qabo xagjiriin
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa sheegay in dib u dhiska ciidamada ay tahay mudnaanta kowaad ee dowladdiisa. Wareysi uu siiyay wargeyska Asharq Al-Awsat Farmaajo ayaa yiri: “Waxaan doonaya in la dhiso ciidan [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiirka arrimaha gudaha dowlada federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen (Odowaa), ayaa ka hadlay dhismaha maamulka gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Wasiirka oo la hadlay warbaahinta afka dowlada ku hadasha ayaa sheegay in dowlada [...]